Shily: OLPC sy ny Politika 2.0 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Janoary 2018 13:59 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Janoary taona 2007 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tena gaga ireo bilaogera Shiliana hatramin'izao amin'ilay solosaina finday 100 dolara Amerikana, OLPC. Saingy ahoana no hahatongavan'ny fitaovana vaovao, natao hamenoana ny hantsana nomerika any Shily? Inona no idiran'ny solosaina finday amin'ny politika? Araka ny fanazavan'i Marcelo Aliaga (ES):
Tahaka ny zava-drehetra, misy Shiliana miasa ao amin'ny tetikasa One laptop Per Child (Solosaina finday iray isaky ny Ankizy iray), tarihan'i Walter Bender ary anaovan'i Nicholas Negroponte antso avo. Izy no Eduardo Silva ary miasa ao amin'ny “Programan'ny Developera OLPC.” Satria tsy maintsy manao andrana izy, dia nandefa ny maodely santatra (prototype) voalohany. Tamin'ny fampahafantarana ny ChilePrimero no nanolorany ny B1
Namoaka lahatsary i Carlos Verdugo (ES) sy ny fahatsapany momba izay mety hitranga ao amin'ny rafi-pampianarana Shiliana miaraka amin'ity fitaovana ity:
Azonareo an-tsaina ve raha manana solosaina finday ny mpianatra tsirairay? Ary raha ampiantsika aterineto wimax izay ho apetraka ao Shily amin'ity taona ity … ahoana no fomba [hanovàna] ny rafi-panabeazana atao fahirano?
Manana vaovao ratsy sy tsara aho:
Ny ratsy: Nanolotra fahafahana ho an'ny minisiteran'ny fanabeazana tamin'izany fotoana izany (Sergio Bitar) hividy ireny ordinatera ireny i Negroponte ary ny fahitan’ (na ny tsy fahitana) ny ministera dia nitaratra hoe “tsia, misaotra anao.” Efa nividy izany i Brezila, Arzantina ary vao haingana i Orogoay ka ho tonga ao amin'izy ireo amin'ity taona ity ny solosaina.
Ny tsara: Na dia eo aza ny fanapahan-kevitra ratsy taloha, misy ireo olona miasa mba ahafahan'ireo solosaina ireo hiditra ao Shily, tahaka ny senatera Fernando Flores ohatra, izany dia noho ny fitiavana an'i Shily ary nanolo-tena hitondra [solosaina finday] an'arivony ho an'ny firenentsika ireo olom-pantany.
Natao nandritra ny fampahafantarana ny antokon'ny hetsika ara-politika vaovao, antsoina hoe “Chile Primero” (ES), na “Shily Voalohany” ny fampahafantarana ilay solosaina finday. Toa vonona be amin'ny teknolojia sy ny politika ity vondrona ity. Ahoana ny ifandraisan'ny Teknolojiam-baovao sy ny politika.? Manazava ao amin'ny blaoginy mikasika ny herin'ny fahavitrihana amin'ny famoronana tetikasa atao amin'ny fitaovana web2.0 i Vlado Mirosevic (ES), talen'ny gazetim-bahoaka El Morrocotudo (ES).
Ny tanjona dia ny tsy ho mpanara-maso ny tena zava-misy, fa kosa mampiasa ny media nomerika mba hisahana ny tsy fetezan-javatra ara-tsosialy sy hitondra hetsika iombonana.
Mazava ho azy, tsy mahafa-po ny rehetra ity fifangaroan'ny teknolojia sy politika ity, Diego Sepulveda (ES) maneho ny fahatsapana fisiana fanararaotana tamin'ny fanombohan'ny “Chile Primero” sy ny fampahafantarana ny OLPC:
Andro vitsy lasa izay, namaky momba ny fahatongavan'ny OLPC XO tao Shily aho, saingy noho ny antony hafahafa, tsapako fa ireo mpanararaotra sy ireo mpanararaotra vaovao 2.0 dia ao ambadik'ity fahatongavana ity sy ny fisehoana tafahoatra an'ity fitaovana ity, izay mifanohitra amin'ny tetikasa Negroponte milaza ny fanohizana ny tetikasa tsy maka tombony. Mahagaga fa miditra ao anatin'ity tetikasa ity ny hetsika roa izay enjehin-tsikera, manolotra izany ho toy ny tetikasa sosialy no sady maka tombony amin'ilay fitaovana. Toa hafahafa koa fa mampiasa an'ity fitaovana ity izy ireo mba hanerena ny governemanta hividy izany, kanefa tany am-piandohana, natao ho amidy amin'ny governemanta tsy misy faneriterena ny fitaovana. Tsy nahomby ny teto Shily noho ny tsy fananantsika vina. Manontany aho hoe, nahoana no mampiasa tetikasa tsy maka tombony ho fitaovam-piadiana faneriterena ara-politika? Azo antoka fa mitady vato ho an'ny taona 2010 izy ireo, saingy tsy maintsy mieritreritra koa isika fa ao ambadik'ireny kilalaon'ny mpankafy aterineto ireny (tsy miresaka iPhone aho), miasa mafy ny olona mba hanolotra fitaovana fanabeazana ary amin'izany no tafalatsaka ao anatin'ny fitondran-tena ratsy indrindra izy ireo.
Iray tamin'ireo politisiana nasaina nitondra ny OLPC ho an'i Shily ny Senatera (sady bilaogera menavazana) Fernando Flores, izay niala vao haingana tao amin'ny antokony taloha, PPD, (Antoko ho an'ny Demaokrasia) noho ny antony maromaro tsy nohazavainy, na izany aza, voarohirohy tamin'ny raharaha kolikoly maromaro tato anatin'ny volana vitsivitsy ny elatra havia. Nanohana ny fananganana ny Chile Primero ihany koa izy